ढोरपाटन नगरपालिका Archives – Samacharpati
बाम गठबन्धनका उम्मेदवार शाही सम्बोधन गर्दै
बागलुङ, ८ मङ्सिर । बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–१ वुर्तिबाङमा शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनावी सभामा बाम गठबन्धनका उम्मेदवार खिमविक्रम शाही सम्बोधन गर्दै । तस्वीरःखेमराज गौतम
बागलुङ, १८ कात्तिक । ढोरपाटन नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष हेमेन्द्र घर्ती सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गर्नुभएको छ । घर्ती देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । घर्तीसहित मोर्चाका नेता, कार्यकर्ता पार्टी परित्याग गरी आइतबार नेकपामा प्रवेश गरेको नेकपा बागलुङका सचिव ज्ञामनाथ गैरेले जानकारी दिनुभयो । पार्टी प्रवेश गर्नेमा मोर्चाको गण्डकी प्रदेश समितिका […]
बाग्लुङ, २६ साउन । मिति २०७६/०४/२६ गते ढोरपाटन नगरपालिका-८ कुहिने बाटोमा रहेको गोठमा सोही स्थानको बोबाङ बस्ने वर्ष ६० को भुम बहादुर बि.क. र निजको श्रीमति वर्ष ६० की बिमा बि.क. आफ्नै गोठमा काम गर्न गएका थिए । उनीहरु गोठमा नै बास बसेका थिए । आज अचानक दुवै जना मृत अवस्थामा रहेको भन्ने खबर प्राप्त […]